Itshaja yeMagSafe Duo ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe | Ndisuka mac
Itshaja yeMagSafe Duo ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe
I-Apple yongeza ngokusemthethweni kuluhlu lweemveliso ezikhoyo zokuthenga izinto zokugqibela zeMagSafe ezibonisiweyo kunye ne-iPhone 12. Itshaja emibini yeMagSafe sele ikuluhlu lwezixhobo ezikhoyo zokuthenga Kwiwebhusayithi yeApple. Kwakubonakala ngathi ayizange ifike kodwa ekugqibeleni yafika.
Sonke siyalazi ixabiso kwaye zii-149 ze-euro. Ishaja ephindiweyo esisebenzela iApple Watch kunye ne-iPhone khange ibonakale ifika kodwa okokugqibela kwaye kwiiyure ezimbalwa emva kokuba iwebhusayithi eSwitzerland yongeze ukufumaneka kwemveliso ngoDisemba 21, iApple iyazise ngokusesikweni ngokuhanjiswa kwangomso olandelayo (e ubuncinci njengoko sibhala eli nqaku).
Imihla yokuhanjiswa inokwahluka
Kuya kuxhomekeka kwimfuno yale mveliso kodwa njengoko sonke sisazi eApple ihlala iphakame phantse kuyo yonke into kwaye kule meko inokuba njalo nayo. Le tshaja inikezelwa njengesipho esihle kakhulu seKrisimesi kwaye kusengqiqweni ukuba imihla yokuhanjiswa iyandiswa njengoko iiyure zihamba. Njengoko besesitshilo ngasentla, ngoku kukho ukufumaneka kwangoko kodwa akufuneki siyithembe lento ukuba sifuna ukuba nale tshaja ngokukhawuleza.
Itshaja ayongezi i-20W okanye i-27W iadaptha yamandla ye-USB-C. Kwimodeli ye-20W, ukutshaja ngaphandle kwamacingo ukuya kwi-11W kunye ne-14W ye-27W. Kwibhokisi intambo iyongezwa kodwa hayi itshaja njengesiqhelo kuphehlelelo lwemveliso yamva nje yenkampani yeCupertino, kodwa yenza inqaku elingaziwayo ukuba oku kuyenzeka ngesiseko esifanelekileyo sokuhlawulisa izixhobo. Kwiwebhusayithi yeApple Uya kulifumana icandelo ngokhetho lokuthenga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Itshaja yeMagSafe Duo ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe
I-Apple ikhupha isiXhobo seCalibration esitsha sePro Display XDR
Iwebhusayithi entsha yokubeka iiodolo zakho zeApple ngeKrisimesi